नेपालको कर सङ्कलन : दक्षिण एशियामै उच्च जनतालाई सुविधा भने न्यून | गृहपृष्ठ
Home नेपालको कर सङ्कलन : दक्षिण एशियामै उच्च जनतालाई सुविधा भने न्यून
नेपालको कर सङ्कलन : दक्षिण एशियामै उच्च जनतालाई सुविधा भने न्यून
काठमाडौं । नेपालको वार्षिक कुल कर राजस्व तथ्याङ्कगत हिसाबमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा उच्च देखिएको छ । तर, नेपाली जनताले भने कर तिरेअनुसार सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा पछिल्लो समय मुलुकमा करसम्बन्धी विवाद तथा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग कुल कर राजस्वको अनुपात २१ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । जुन दक्षिण एशियाली देशहरूभन्दा बढी छ भने केही विकासशील देशहरूको हाराहारीमा देखिन्छ ।
सन् २०१७ को दक्षिण एशियाली देशहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने भारतको जीडीपीमा कुल कर राजस्वको अंश १६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस्तै पाकिस्तानमा ११ दशमलव २ र बङ्गलादेशमा ११ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । श्रीलङ्काको कर राजस्व यो तथ्याङ्कभन्दा पनि कम छ । यो तथ्याङ्कले नेपालमा दक्षिण एशियाली देशहरूको तुलनामा धेरै राजस्व उठिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा सरकारको राजस्व लक्ष्य रू. ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख रहेको छ । यसमा स्थानीय तहको कर पनि जोड्दा करीब १० खर्बको हाराहारीमा हुन आउने करविज्ञहरू बताउँछन् । कर सङ्कलनमा आक्रामक देखिए पनि त्यसको उपयोगमार्फत सरकारले जनविश्वास भने जित्न सकेको देखिँदैन । करबापत पाउने न्यूनतम सुविधा पनि नपाउँदा सरकारप्रति जनता आक्रोशित हुँदै आएका छन् ।
त्यसको उदाहरणका रूपमा हालै मात्र स्थानीय तहले लगाउने करको सूचना सार्वजनिक भएपछि मुलुकमा चर्किएको कर विवादलाई लिन सकिन्छ । कर सङ्कलनमा आक्रामक देखिएको सरकारले कर जनताको हितका लागि हो भनेर विश्वास दिलाउन नसक्दा र जनहितमा खर्च गरेको भनेर पारदर्शी रूपमा देखाउन नसक्दा नगर्दा करको विषय सधैं विवादास्पद बन्दै आएको छ ।
करविज्ञहरूका अनुसार राजस्व सङ्कलनको औचित्य, वार्षिक खर्च, सेवासुविधालगायतको विषयमा कुनै स्पष्टता नभई कर थोपरिएका कारण पनि अहिले विरोध देखिएको हो । सरकारले कर उठाउँदा त्यसलाई बढीभन्दा बढी विकास निर्माण र जनताको सेवासुविधामा लगाउनुपर्नेमा त्यसो नभई सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा मात्र खर्च बढाइरहेको छ ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी विगत कैयौं वर्षदेखि जनताको सन्तुष्टि मापन गर्ने आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक नरहेको बताउँछन् । ‘सर्वप्रथम त नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र करको तथ्याङ्कमा समावेश गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्र नै छुटिरहेका छन्, त्यसमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपालको कर सङ्कलनअनुसार त्यसको पूँजीगत खर्चमा प्रयोग भने अत्यन्त न्यून भइरहेको छ ।’
जनताबाट उठाएको करलाई सरकारले जनहितमा खर्च गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा जनताको सन्तुष्टिको आधारमा मापन हुन्छ । आर्थिक परिसूचकहरूबाट त्यो थाहा पाउन सकिन्छ । नेपालका दशौं वर्षदेखिका यस्ता सूचकहरू चित्तबुभ्mदो नभएको उनले बताए । अहिलेको सरकारलाई आपूmले जनताबाट लिएको कर ठीक ठाउँमा, ठीक तरीकाले, ठीक प्रयोजनका लागि खर्च गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय सरकारले चालू खर्च रकम बढाउँदै लगेको छ । चालू खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ, तर पनि शतप्रतिशत खर्च भने हुन सकेको छैन । विकास निर्माणमा छुट्याइएको बजेट फ्रिज हुने समस्या छ । मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गइसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा चालू खर्च रकम अझ बढ्ने देखिन्छ ।
डा. विश्व पौडेल, अर्थविद्
आवश्यकताअनुसार राजस्व उठाउनुपर्छ
आवश्यकताभन्दा बढी राजस्व उठाउनुमा राज्यको दुर्नियत देखिन्छ । नेपालमा पनि आवश्यकताभन्दा बढी राजस्व उठिरहेको छ । सार्क देशमा जीडीपीको १५ प्रतिशतको अनुपातमा राजस्व उठिरहेको छ भने सोही अनुपातमा नेपालमा राजस्व उठाइएको भए स्वाभाविक हुन्थ्यो । बढीभन्दा बढी करका कारण उद्योग, कर्पोरेट क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई समेत समस्या भइरहेको छ । यहाँ करको तुलनामा जनताले पाउनु पर्ने सुविधा भने अत्यन्त न्यून छ । बढी राजस्व उठाउने लोभले विभिन्न क्षेत्रमा समस्या निम्तिरहेको छ । राज्यले आवश्यकताभन्दा बढी कर उठाए करको दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ ।
खर्चमा प्रभावकारिता देखिएन
नेपालमा राजस्व रकम खर्चमा प्रभावकारिता देखिँदैन । जनताका लागि विनियोजित रकममा भ्रष्टाचार तथा अन्य कारणले लक्षित वर्गले प्रत्यक्ष लाभ लिन पाउँदैनन् । सरकारले छुट्याएको पूँजीगत खर्च नै पूरै खर्च हुन सकेको छैन । सडक, पुल, प्रसारणलाइन जस्ता क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम फ्रिज हुने गरेको छ । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा पूँजीगत खर्च कम होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायको खर्च क्षमता कमजोर भयो, भ्रष्ट मानसिकता भयो, सार्वजनिक संस्थानहरू कमजोर भए ।